Ciidamada oo saaka howlgallo ka wada magaalada Beledweyne – Radio Muqdisho
Ciidamada oo saaka howlgallo ka wada magaalada Beledweyne
Ciidamada dowladda ayaa saaka howlgallo saf balaaran ah ka wada xaafado ka mid ah degmada Beledweyne iyo deegaano ka baxsan.
Sarakiiil ka tirsan ciidamada qalabka sida ee ka howlgala gobolka Hiiraan ayaa Radio Muqdisho u sheegay in howlgalkan lagu adkeeynayo amaanka magaalada Beledweyne.
Ciidamada ayaa lagu soo waramayaa ineey baaritaano ku sameeynayaan dadka iyo gaadiidka, iyadoo howlgalka lagu soo qabtay tiro dhalinyaro ah oo la rumeysanyahay iney dhac u geystaan gaadiidka iyo dadka safarka ah.
Dadka ku dhaqan magaalada Beledweyne ayaa soo dhaweeyay howlgalkan lagu xaqiijinayo amaanka, maadaama magaaladaasi ay ka socdaan mashaariic horumarineed, dadkuna ay usoo jeesteen iney ka baxaan muqdiga iyo amnidarrada.
Howlgalkan ayaa imaanaya xilli kooxo burcad ah ay dhac u geysteen gaadiid xamuul ah oo marayay duleedka magaalada Beledweyne, waxaana arrintaasi aad uga xumaaday bulsha weynta Soomaaliyeed.